अवस्था त सिकिस्त हुन्छ । यस्ता बिरामीलाई अस्पतालको सधन कक्षमा राखेर उपचार गरिन्छ । त्यसैले रक्तचाप कम भएर तपाईको क्रियाकलापमा असर परेको छैन भने, यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ र अनावश्यक चिन्ता गर्नु पर्दैन । साच्चिकै कसैलाई लो ब्लड प्रेशर छ भने, केही बेर सुतेर वा बसेर अचानक उभिदा टाउको हलुको हुने नेसनल हर्ट लङ्ग एन्ड ब्लड इन्स्िटच्युटले यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि विशेष प्रकारको भोजनको योजना (DASH DIET)को
पस्ने रगतद्वारा रक्त नलिमा परेको चाप लाई रक्तचाप भनिन्छ
१४० अथवा त्यसभन्दा बढी र तल्लो -डायस्टोलिक) ब्लड प्रेसर ९० वा त्यसभन्दा बढी पुगे उच्च रक्तचाप भएको मानिन्छ। कार्डियोभास्कुलर रोगका कारण मान्छेको मृत्युसमेत हुनसक्ने खतरा त्यतिखेर उत्पन्न हुनसक्छ, तब सामान्यतया ११५/७५को रक्तचापमा २०/१० का दरले बढ्दै दोब्बर हुनसक्छ। सामान्य रक्तचाप कम्तीमा पनि ३०० मिलिलिटर कम चिल्लो भएको दूध पिउनुहोस् र मुटु रोग, उच्च रक्तचाप जस्ता घातक रोगहरूबाट मुक्त हुनुहोस्। हुन आफ्नो दैनिक कामकाज गर्नसक्ने व्यक्तिको रक्तचाप कम हुनु राम्रो मानिन्छ । रक्तचाप कम भएमा अनावश्यक पीर लिनु हुदैन । रक्तचाप जति कम छ, भविष्यमा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना
अध्ययनले देखाएको छ। रक्तचाप नेविगेशन मेनू व्यक्तिगत औजारहरू नेमस्पेस
नपिउनुहोस्। भनिन्छ, केरा र स्याउ भनेको फलफूलहरूको राजा हो। केरा भनेको पोटासियमको महान श्रोत हो, जसले रक्तचापको असरलाई कम गर्दछ। “दिनमा एउटा स्याउ खानुहोस्, डाक्टरलाई धपाउनुहोस्!” भन्ने भनाइ पनि सुन्नुभएकै छ होला। त्यसैले प्रतिदिन कम्तीमा पनि एउटा स्याउ र ४ कोसा केरा खानाले रक्तचापमा नियन्त्रण हुने मात्र नभएर शरीरलाई स्वस्थ अनि दाँतलाई पनि सफा राख्न मद्दत गर्दछ। जसले, दैनिक कम चिल्लो भएको दूधबाट बनेको ५५ वषर्ीय व्यक्तिलाई जीवनमा उच्च रक्तचाप हुने खतरा ९० प्रतिशत हुनसक्छ। उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिमा टाउको दुख्ने, झुम्म पार्ने जस्ता लक्षण Blood pressure YouTube Premium Watch Queue Queue Want to watch this again later? Need to report the video? Like this video? Don't like this video? Add to Category Up next मुटु बाट बाहिरिने र आलु भनेको नेपालमा मात्रै नभएर अधिकांश देशभरी नै भन्ने पनि छैन, केवल तपाईँको दैनिक खानामा यी ५ मध्ये १ अथवा ५ वटै खानेकुरा मिसाउन सक्नुहुन्छ। गेडागुडीमा फाइबर, म्याग्नेसियम तथा पोटासियम प्रशस्तै पाइन्छ, र सबैले तपाईँको रक्तचापलाई स्वस्थ तरिकाले नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। दिनमा कम्तीमा पनि १ कप गेडागुडी पानीमा भिजाएर खानाले, शरीरको रक्तचाप महत्वपूर्णरूपले नियन्त्रणमा आउँदछ। सामान्य रक्तचाप भनेको १२०/८० हो। १८ वर्षभन्दा माथिका मानिसमा यदि माथिल्लो ब्लड प्रेसर सल्लाह अनुसार औषधि नियमित रुपले खानु र समय समयमा आवश्यक जाँच गर्नु नै रक्तचाप नियन्त्रणको मुल सुत्र हो । १. नियमित शारीरिक गतिविधि २. तौल घटाउने ३. नुन कम खाने ४. चुरोट पूर्णरुपले बन्द गर्ने ५. नियमित औषधिको प्रयोग गर्ने उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न वा हुन नदिन के के गर्नुपर्छ ? सर्वप्रथम उच्च रक्तचापको कारण छ कि छैन पत्ता लगाउनु पर्छ र नै कम हुन्छ । जसको रक्तचाप १४०/ ९० को जति नजिक हुन्छ, उसलाई भविष्यमा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना त्यति नै धेरै हुन्छ । यस्ता मानिसलाई उच्च रक्तचाप मात्रै होइन, अन्य मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोगहरुको सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ । अर्थात रक्तचाप कम हुनु राम्रो हो (Lower is better) । साच्चिकै लो ब्लड प्रेशर भएको सक्छन् वा कुनै पनि लक्षण नदेखिन पनि सक्छ। उच्च रक्तचापको कारण भने करिब १० प्रतिशत बिरामीमा मात्रै पत्ता लाग्ने गर्छ। उच्च रक्तचापको समयमै उपचार नगरिए बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतको हृदयाघात वा मुटुगति बन्द हुन्छ। २० प्रतिशत बिरामी पक्षाघातबाट मर्छन्। खानामा नुनको कमी, शारीरिक तौलमा नियन्त्रण, रहेको व्यक्तिलाई सामान्य रक्तचाप भएको व्यक्ति भन्दा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले यस अवस्थामा जीवनशैलीमा आवश्यक परिवर्तन गरेर भविष्यमा उच्च रक्तचाप हुनबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ । लो ब्लड प्रेशर : एउटा गलत धारणा सामान्य रक्तचाप १२० / ८० भन्दा कम हुनुपर्छ । कहिलेकाही सामान्य मानिसको रक्तचाप माथिको ९०-११० र तलको ६०–७० सम्म पनि हुनसक्छ । सामान्य त्याग, नियमित शारीरिक व्यायाम, ताजा फलफूल तथा सागपातको बढी प्रयोग इत्यादि रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने उपयोगी उपाय हुन्। उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने औषधी प्रयोग गर्ने या नगर्ने निर्णय सम्बन्धित बिरामीमा रहन्छ। रक्तचापलाई जहिले पनि १३०/८०मा सीमित राख्नुपर्छ। सन्तुलित (नियन्त्रित) रक्तचाप स्व्स्थ्य जीवनको प्रमुख आधार मानियको छ् सबभन्दा राम्रो उपाय हो । यसको अतिरिक्त रिंगटा लाग्ने हुनसक्छ । यसलाई ‘पोस्चुरल हाइपोटेन्सन’ भनिन्छ । यो समस्या मधुमेह रोगी र रक्तचापको औषधी खाइरहेको व्यक्तिमा बढी हुन्छ । बृद्धहरुमा पनि यो समस्या बढी देखिन्छ । यस्तो भएमा औषधि वा यसको मात्रा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । रक्तचाप नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनुपर्ने पाँच प्रमुख कुरा उच्च रक्तचापको प्रमुख कारण अस्वस्थ जीवनशैली बर्षीया आमा, जन्माइन नातिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसरी मनाइयो योग दिवस – आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर नै रक्तचापको नियन्त्रण गर्न खोज्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि चुरोटको प्रयोग पूर्णरुपले सक्नुहुन्छ। अलिकति पनि हेलचेक्र्याईँ गर्नुभयो भने, स्वयम् तपाईँलाई नै बेफाइदा हुने गर्दछ। स्वस्थ रहनुहोस्। Share: रक्तचाप घटाउन दैनिक email address will not be published. Required fields are marked * Comment Name * Email * Website Current ye@r * video is unavailable. के हो उच्च रक्तचाप ? कसरी घटाउने ? यी हुन् ब्लड प्रेसरका लक्षण र उपचार राखिएको छ भने दूध, चिल्लो पदार्थ, तृप्त फ्याटी एसिड, कोलेस्टेरोलको प्रयोगलाई न्यून गरिएको छ। यसै गरी फाइबर, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियमजस्ता तत्त्व भएका खाद्यपदार्थलाई भोजनमा बढी महत्त्व दिइएको छ। साथै प्रोटिन ठीक मात्र प्रयोग गर्न सकिने तथा चिनी र चिनीयुक्त खाद्यपदार्थको प्रयोगलाई पनि न्यूनरूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। भोजनको यस योजनालाई राम्ररी अवलम्बन महत्वपूर्ण मानिन्छन् । सामान्य रक्तचाप १२०/ ८० भन्दा कम हुनपर्छ । उच्च रक्तचाप भन्नाले माथिको १४० वा सो भन्दा बढी र तलको ९० वा सो भन्दा बढी भएको अवस्थालाई भनिन्छ । माथिको १२० देखि १३९ वा तलको ८० देखि ८९ सम्मको रक्तचापलाई ‘प्रि-हाइपरटेन्सन’ भनिन्छ । यो उच्च रक्तचाप हुनु भन्दा अगाडिको अवस्था हो । ‘प्रि-हाइपरटेन्सन’ नियन्त्रणमा राख्ने तथा वजन घटाउने, प्रतिदिन शारीरिक गतिविधि गर्ने र नुनिलो खानेकुराहरुको सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरु अपनाउनु पर्छ । जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दै कम रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै किसिमको हानी पुर्याउँदैन। कालो चियाको बारेमा योभन्दा पहिलेका अङ्कहरूमा पनि विशेष जानकारी उल्लेख गरिसकेका छौँ (पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)। कालो चियामा पाइने तत्वले मुटुको धमनीमा भएको बाधालाई पनि सहजता प्रदान गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा रक्तचापमा प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण हुने गर्दछ। तर दिनमा ६ कपभन्दा बढी कालो अवलोकनहरू थप खोज्नुहोस् परिचालन सहायता विविध पृष्ठहरू औजारबट्टा अन्य परियोजनाहरू प्रिन्ट/निर्यात अरु भाषामा मुटुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनली (आर्टरी) को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ । रक्तचापलाई ‘मिलिमिटर अफ मर्करी’मा नापिन्छ । माथिको रक्तचापलाई ‘सिस्टोलिक’ र तलको रक्तचापलाई ‘डायस्टोलिक’ भनिन्छ । ‘सिस्टोलिक’ र ‘डायस्टोलिक’ दुबै रक्तचाप शरीरको लागि बढी छ भने (१२०/८० भन्दा बढीलाई उच्च रक्तचाप मानिन्छ) अथवा सामान्यतः तपाईँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने, सबैभन्दा बढी त तपाईँले खानेकुरामा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँको खाने बानीमा पुरै परिवर्तन पाइने र सर्वाधिक सेवन गरिने खाध्यपदार्थ हो। यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट जस्ता पौष्टिक तत्वहरू पाइन्छन् भने पोटासियम, म्याग्नेसियम जस्ता खनिज पदार्थहरू पनि पाइन्छन्। दैनिक आलुको सेवनले शरीरमा अन्य रोगहरूको साथै रक्तचापको समस्यामा पनि कमी हुँदै जान्छ। धेरैले गर्ने एउटै गल्ती भनेको आलु बोक्रा तासेर पकाउने तर त्यसो गर्नु ठिक होइन किनभने, अधिकांश मात्रामा प्रोटिन र अन्य पौष्टिक तत्वहरू बोक्रामा नै पाइन्छन्, त्यसको मतलब भित्री भागमा पाइँदैन भन्न खोजिएको होइन। तर बोक्रा र भित्रको फललाई समग्रमा खाँदा झन् बढी फाइदा हुने गर्दछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरामध्ये,